Kugqabuka igoda kuShwi noMtekhala? - Ilanga News
Home Izindaba Kugqabuka igoda kuShwi noMtekhala?
Kugqabuka igoda kuShwi noMtekhala?
LISENGCUPHENI yoku-hlakazeka ngenxa yokungaboni ngaso linye kwamalungu alo, iqembu likamaskandi, uShwi noMtekhala, (abasesithombeni), okubikwa ukuthi sekuke kwaba nemihlangano emibili yemindeni yawo, eNquthu naseDundee, ngokwahlukana, kudingidwa udaba lwawo kodwa lutho ukutholakala isixazululo. Ngokuthola kweLANGA, into edale ukuphambana kulezi zilomo okunguMandla “Shwi” Xaba noZwelenduna “Mtekhala” Magubane wukuthi uMtekhala ‘uteleke’ namagidangoma, ekhala ngokuthi akasathandi iqembu lisebenzisane nemenenja yalo, uMnu Bongani Manyathi, kanti uShwi akahambisani nezikhalo zikazakwabo.
UBongani (Manyathi) usebenze naleli qembu kusukela ngo-2013, ngaleso sikhathi lalehlelwe yizinga emuva kwengxabano yalo nenka mpani iBula Music. Lokhu kwaholela ekutheni uMtekhala angabonakali kweminye imicimbi eyahanjelwa yileli qembu ngoZibandlela (December), okubalwa owawuKwaMashu, eThekwini. NaseNtola, eNdwedwe, uShwi wafika ehamba yedwa. Ekhuluma neLANGA uMtekhala, uthi okwenze wahlehla eqenjini wukuthi bese kunesikhathi eside ecela kuxoxwe ngezinto ezithile angenelisekile ngazo.
Uthi nyakenye wathola ukuthi kunenkampani ebizwa ngeSiginci Media, esetshenziswe ukufaka umculo weqembu online, kodwa be ngachazelekile ngayo nokusebenzisana kwabo nayo.
“Le nkampani ibhalise umsebenzi wethu ekubeni nathi sinenkampani, iMtekhala noShwi Music Entertainment, okusho ukuthi lena yethu yispaza,” kusho uMtekhala. Uthi wanquma ukuma ngenxa yokuthi uShwi noKhethonjani Dludla (abasebenza naye) kabahambisani naye. Uthe akulula ukusebenza eqenjini uma uShwi noKhethonjani befuna kuqhu-tshekwe kusetshenzwe, ekubeni kunezikhalo angenelisekile ngazo. “Ngifike ngikhulume nabo kube sengathi siyezwana, bese beyangijikela,” kusho uMtekhala. UShwi uthi okwenza bengaboni ngaso linye, wukuthi ezikhalweni zikaMtekhala kunezinsolo ezibucayi ezingenabufakazi. Uthi yena akanankinga nemenenja futhi akukho okuzomhlukanisa nayo. “Ngeke ngivumele ukusetshenziswa ngento ezongifaka ezinkingeni. Imenenja ingisebenzela kamnandi, uma kuhlehla yona eqenjini, nami ngiyashiya. “Ngeke ngikwazi ukuzibandakanya nohlelo lokuxoshwa kwayo,” kusho uShwi. Uthi ukubhikisha kukaMtekhala kubalahlekisele ngemisebenzi ewu-11 ngoZibandlela, nakulo nyaka kawuqhubeki umsebenzi ngenxa yakhe.
“Sengikhathele, ngihlukumezeke kakhulu eqenjini nasezinkampanini eziningi esidlule kuzona phambilini, sikhishwa nguyena, ethi siyarojwa, ngakhoke akuphele makuphela,” kusho uShwi. UMnu Manyathi uthe: “Senginqume ukuhoxa ekusebenzeni neqembu ngoba kangifuni lihlakazeke ngenxa yami. Izinsizwa mazihlale phansi zilungise udaba. “UMtekhala ‘uteleke’ namagidangoma okuyizingane zakubo zonke, uma kuwukuthi yiyona ndlela abonga ngayo lena, kulungile, umhlaba uyindilinga, ngelinye ilanga izwe liyolazi iqiniso. Leli qembu silibuyise kanzima eminyakeni edlule sekungathi liphelile,” kusho uMnu Manyathi. UMnu Celimpilo Manyathi, ongumnikazi weSiginci Media, uthi akasebenzisani naleli qembu futhi kayikho imali ayaziyo eliyenze ngaphansi kwale nkampani. “Ngacelwa yimenenja yalo iqembu, ukuthi ngilifakele umculo online ngesikhathi seCovid-19, ngoba ama albhamu bekungasebenzeki ngawo, nanokuthi yona yayingayiqondi eyokusebenza online komculo,” kusho uMnu Manyathi. Leli qembu laba semlandweni ngokudayisa amakhophi angaphezulu kuka-750 000 ngo-2004, ngesikhathi likhiphe i-albhamu ethi, “Wangisiza Baba”, eyagqama ngengoma ethi, “Ngafa”.
Previous articleInduna ifuna kudingiswe abafundi ‘abadala izinxushunxushu esikoleni’
Next articleBakhala ngendawo ‘esiyisilaha sabantu’